China North America- Ọrụ CTIA na Ule | MCM
Kedu ihe bụ CTIA CERTIFICATION?
CTIA, ndebiri nke Cellular Telekomunikashions na Internet Association, bụ nzukọ na-abaghị uru nke e guzobere na 1984 maka ebumnuche nke ịba uru maka ndị ọrụ, ndị nrụpụta na ndị ọrụ. CTIA nwere ndị ọrụ US niile na ndị nrụpụta sitere na ọrụ redio mobile, yana site na ọrụ data na ngwaahịa ikuku. Ndị FCC (Federal Communications Commission) na Congress kwadoro, CTIA na-arụ ọtụtụ ọrụ na gọọmentị na-ejibu. Na 1991, CTIA mepụtara usoro nyocha na asambodo na-achọghị iche, nke onwe ya na nke etiti maka ụlọ ọrụ ikuku. N'okpuru usoro a, ngwaahịa niile dị na ọkwa ndị ahịa ga-anwale nnabata nnabata na ndị na-agbaso ụkpụrụ ndị dị mkpa ka a ga-enye ohere iji akara CTIA wee kụọ ụlọ ahịa ụlọ ahịa nke North America nkwukọrịta ahịa.
CATL (CTIA Authorized Testing Laboratory) na-anọchite labs ndị CTIA kwadoro maka ule na nyocha. Ulo oru nyocha emere site na CATL ga-akwado CTIA niile. Ọ bụ ezie na nyocha ndị ọzọ na nsonaazụ sitere na ndị na-abụghị CATL agaghị amata ma ọ bụ na ha enweghị ohere ịnweta CTIA. CATL nke CTIA nyere nkwado dịgasị na ọrụ na asambodo. Naanị CATL nke ruru eru maka nnabata nnwale na nyocha nwere ohere ịnweta asambodo batrị maka nnabata na IEEE1725.
▍CTIA Testkpụrụ Ule Batrị
a) Ihe asambodo choro maka sistemụ Batrị Nkwado na IEEE1725 --- Kwesịrị iji batrị sistemụ nwere otu sel ma ọ bụ ọtụtụ sel ndị ejikọtara na ya;
b) Asambodo choro maka sistemụ Batrị Nkwado na IEEE1625 --- Kwesịrị iji batrị sistemụ nwere sel nwere ọtụtụ sistemụ jikọtara ma ọ bụ na usoro abụọ;
Ndụmọdụ dị mma: Họrọ ụkpụrụ asambodo dị elu nke ọma maka batrị ejiri na ekwentị mkpanaaka na kọmputa. Ejikwala IEE1725 maka batrị dị na ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ IEEE1625 maka batrị na kọmputa.
● Teknụzụ siri ike: Kemgbe 2014, MCM nọ na-aga ogbako mkpọ batrị nke CTIA nwere na US kwa afọ, ma nwee ike nweta mmelite ọhụụ ma ghọta usoro ọhụụ banyere CTIA n'ụzọ ọsọ ọsọ, n'ụzọ ziri ezi ma na-arụ ọrụ.
●Iru eru: MCM bụ CATL nyere ikike site CTIA na tozuru oke ịrụ niile usoro metụtara asambodo tinyere ule, ụlọ ọrụ ndị na-enyocha na-ebugote akụkọ.
Nke gara aga: IECEE- CB
Osote: Transportgbọ njem- UN38.3
Ctia Asambodo Ahịa
Usoro Ctia Asambodo
Ọrụ Asambodo Ctia
Oge Ctia na-ebute oge
Akwụkwọ Ctia Teknụzụ
Ctia chọrọ nka na ụzụ
Ihe Ctia Ule
Testzọ Ule Ctia
Akụkọ nyocha Ctia
Tialọ nyocha Ule Ctia
Laboratory Ule nke Ctia
Ọnụahịa Ctia Ule
Ọrụ Ctia Ule
Oge nyocha Ctia